Fiberglass rebar maka ihe - ngwaahịa & ndepụta ọnụahịa
+1 (347) 705-78-08 (gbakwunye 576182)
Mgbanwe nke ọnụahịa GFRP
Fiberglass na-agba ume ntupu
Fiberglass masonry ntupu
Mejupụtara mgbidi agbatị
Glassfiber osisi osisi
Ihe ngbanwe rebar
Maka ndị na-ere ahịa
Nkwado ntụkwasị obi na-enweghị nchara
Nkwalite Fiberglass karịrị akarị site na ọtụtụ njirimara ọrụ ọrụ ma ọ dị ọnụ ala karịa!
Gaa na katalọgụ nke rebar Uru niile
Ọ na-ewu ewu n’ụwa niile
A na-eji reberglass rebar mee ihe na USA, Canada, Japan, Europe, Australia, Asia na Africa.
Nye iwu Enwekwu oru
Ngwunye nke faiba glaasi na-eji dochie ọla na eriri welded n'ụzọ gara nke ọma - ọ siri ike karị, dị mfe, dị ọnụ ala karịa ma dịgide. Ngwunye nke plastic anaghị eme ka àkwà mmiri oyi na mgbidi.
Fiberglass ntupu katapila Masonry ntupu katapila
Oke ngwa niile
Enwere ike iji ntanetị mee ihe na ụlọ ọrụ, na-ewu okporo ụzọ, na-ewu ụlọ nkeonwe, na-ewusi ụlọ ndị dị n'ụsọ osimiri ike. Ọ pụrụ iche na iwusi ụlọ sayensị na ahụike ike.
ngwa Ọrụ anyị
Anyị nwere ike ịnapụta iwu gị gburugburu ụwa. Anyị na-arụ ọrụ n'okpuru iwu INCOTERMS 2010 na usoro nke FCA. FOB, CIF ma ọ bụ CFR. Transportgbọ njem na-akwado nkwado dị ọnụ ala karịa nke nchara.
Gbasara anyị Banyere nnyefe
Anyị na-achọ ndị na-ere ahịa
Soro ndi otu anyi wee buru onye mbu nke ngwa ihe eji ihe eji ewu ihe
More nkọwa banyere dealer Kpọtụrụ anyị
Njikwa nrụpụta siri ike
Anyị na-eji nlezianya ahọrọ ndị na-eweta ngwa ọrụ ma na-achịkwa usoro mmepụta ọ bụla. Anyị na-anwale ngwaahịa anyị mgbe niile.
uru Nye iwu
Faiba glaasi rebar & ntupu maka ihe
A na-eji fiberglass rebar mee ihe n'ụwa nile - na US, Canada, Japan na mba Europe - kemgbe 1970th. Mba ndị na-aga n'ihu na narị afọ gara aga ghọtara uru ọ bụla iji fiberglass rebar weta. Anyị na-enye rebar na diameters site na 4 ruo 22 mm. O kwere omume imepụta ihe ruo 32 mm na arịrịọ nke onye ahịa ahụ.
Mejupụtara (faiba glaasi) ntupu na-eji mee ka ala, ụzọ, ọdụ ụgbọ elu na ihe ndị ọzọ ihe owuwu. Nke a bụ dokwara ike nnọchi nke a ígwè ntupu. Anyị na-enye ntupu nwere oghere dị iche iche: 50 * 50 mm, 100 * 100mm, 150 * 150 mm, 200 * 200 mm na 300 * 300 mm. O kwere omume imepụta nha oghere ntanye ruo 400 * 400 mm na arịrịọ nke onye ahịa. The n'obosara waya diameters: 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm na 8 mm. E nyere na mpịakọta ma ọ bụ akwa.
A na-eji ntanye Masonry mee ka mgbidi ụlọ sikwuo ike na brik. Ejiri na mpịakọta nwere ọtụtụ nhọrọ obosara - 2 cm, 20 cm, 25 cm ma ọ bụ 33 cm. Ọ bụrụ na ịchọrọ obosara ọzọ, ịnwere ike ịzụta mpịakọta obosara 50m ma bepụ ya na ịkpụ akwa.
Onye anyi bu na uru anyi
KOMPOZIT 21 bụ otu n'ime nnukwu ndị na-emepụta ihe na Russia. Anyị na-arụpụta ihe karịrị 4 nde miln mita nke rebar na 0.4 mln m2 nke ntupu annualy. Uru anyị bụ: ọnụahịa dị ala, oke nke ngwa ọrụ na njikwa njikwa siri ike. Anyị na-ebuga ngwaahịa niile n’ụwa niile.
Chekwaa ihe ruru 50%
Chekwaa ego mbupu
Omume ọkụ dị ala
Frp rebar nwere okpukpu asatọ karịa nke nchara, nke na-ebelata oke ibu nke ihe owuwu yana ibu dị na ntọala n’enweghị ike ọ bụla.
Frp rebar dị mma maka ahụike mmadụ mana enweghi ihe radionuclides na-emerụ ahụ. A na-enyocha nchekwa nke ngwaahịa anyị site na asambodo ọcha.
I ghalata oke nke oma nke oma ma oburu n’enye gi metal na otu dayameta nke rebar. Ọzọkwa, ọ bụrụ na i were ike were ego chekwaa ga-ewe 50%.
You na-echekwa na nnyefe n'ihi ntakịrị nke rebar. 3000 mita nke frp rebar dabara na ogwe ụgbọ ala. Ọnụ ọgụgụ a zuru ezu iji kwado ntọala slab nke ụlọ nwere ọkara.
Will ga- belata ego na njigide ụlọ a. Withlọ a na-eji fiberglass rebar mee ihe chọrọ obere kpo oku karịa nke nwere ihe nchara.
Build na-ewu ọtụtụ afọ! N'ihi nguzogide kemịkalụ na corrosion nke na - ewusi ihe mejupụtara ya ike, ndụ ọrụ nke fiberglass rebar na ihe karịrị afọ 100 (ma e jiri ya tụnyere analogues steel).
Na-eji armored etiti site na dielectric na-anaghị eduzi ọkụ eletrik, yabụ ị na-enweta mmụba na mgbasa ozi redio ma belata mmetụta nke mpaghara eletriki eletrik.
Na-ewu ụlọ na-enweghị “àkwà mmiri oyi”, n'ihi na nkwado fiberglass anaghị eduzi ọkụ, n'adịghị ka nchara. Maka mba ndị nwere ihu igwe oyi, nsogbu nke oke okpomọkụ na nkwụcha mgbidi, ala na ntọala dị mkpa ngwa ngwa.
Sim na-eme ka usoro ịkpụ na igbatị ma belata ụgwọ ọrụ. Onye ọrụ ọ bụla nwere ike ijikwa frp rebar na ngwaọrụ na mbọ dị ala.
Kedu ihe mere ịhọrọ eriri fịbaịlị anyị?
Anyị na-ewepụta ọkpọba plastik na Russia ma jiri naanị akụrụngwa dị elu sitere na ndị na-emepụta ụwa. N'ihi njikarịcha nke usoro mmepụta na nrụpụta, ọnụahịa nke ngwaahịa anyị dị ala. Nke a bara uru maka gị.
Anyị ga-ahọrọ ụzọ njem kachasị adaba ma dị ọnụ ala ma hazie nnyefe gaa n'akụkụ ọ bụla nke mbara ala.
Olu di elu
Ndị chọrọ ọla edo chọrọ ka a na-ahụ ya mgbe niile, maka anyị na-arụ ọrụ 24/7.
Faiba glaasi rebar
0.54 $/ kwa mita (10 mm rebar)
Nguzogide nrụgide. Na-eguzogide ọgwụ dị iche iche ma sie ike mgbe a na-emikpu gị n'ime mmiri.
Ike. Minumum valuse bụ 1000 MPa.
Ibu ibu. Oge 8 dị ala karịa nchara. Ọ dị mfe ibufe.
Nwụnye. Ọ dị mfe ịkpụ. Enweghị ịgbado ọkụ.
Ngwongwo Thermal. Anaghị eduzi okpomọkụ. Ọnọdụ arụ ọrụ ọnụnụ - 0.35 W / m * ° C.
Efu. Ọnụ ala dị ala, nnyefe dị ọnụ ala na ogologo ọrụ, nke na-ebelata ụgwọ ọrụ ọrụ ngo.
Igwe Ọdụdọ. A naghị eduzi eletrik.
Ntughari EMI / RFI. Emebila ihe mgbaàmà redio na netwọk ikuku. Ọ dị mma maka mpaghara nwere radars, antennas, igbe oku eletrik na ime ụlọ MRI.
Modulus nke Elasticity - 55 GPa
1.7 $/ kwa mita (10 mm rebar)
Oxidation na corrosion ga-ekwe omume. Na-achọ mkpuchi mkpuchi na gburugburu corrosive.
Ike nke ngwa agha - 390 MPa.
May nwere ike ịchọ ngwa ọrụ pụrụ iche iji bulie ya nnukwu nnukwu ugbo ala maka njem.
A chọrọ ịgbado ọkụ na iji ngwaọrụ pụrụ iche rụọ ọrụ.
Na-eduzi okpomọkụ. Ihe ọnụọgụ nke arụmọrụ dị okpukpo iri abụọ elu - 12 W / m * ° C.
Esemokwu na EMI / RFI akara.
Modulus nke Elasticity - 200 GPa
Inwe ajụjụ ọ bụla?
Ekwenyere m na Amụma nzuzo
Anyị na-eji kuki ka mma gwuo saịtị anyị. Ọ bụrụ na ị na-eji saịtị ahụ, anyị ga-ewere ya na ọ dabara na gị.OkAmụma nzuzo